Haikus: ziyini, izakhi nokuningi | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ezimfishane igebe elihlala likhula liqala ukwenziwa kusengaphambili kwabafundi nababhali abasha ngenxa yesikhala se-Intanethi esivumela ukuthi sitakule zonke lezo zindaba ezincane, amavesi nezinkondlo ukuvusa isithombe, umuzwa noma izaba ezilula zokuphunyuka.
Esinye sezibonelo ezinhle kakhulu zalo mkhuhlane we-micro nokuthi ngokuqinisekile iningi lenu selizokwazi, yi haiku (俳 句), eyaziwa nangokuthi i-haiku, uhlobo lwe inkondlo yasendulo yaseJapan ngokuvamile kususelwa ku- ukwakheka kwamavesi amathathu amaqoqo ezinhlanu, 5 no-7, Ukuhunyushwa kwaseNtshonalanga kwe-metric 17 ye-blackberry esetshenziswa yi-haiku yasekuqaleni. Ezinye zezinye izidingo ezifunwa yile ndlela yezincwadi zasempumalanga zifaka leyo eyaziwa njenge kigo (季 語), igama elisho isikhathi esithile sonyaka noma leyo njongo engaguquki yokusondela emvelweni.
Kusukela ngekhulu leshumi nesikhombisa IHaiku yaduma njengendlela yokuveza inkolo yaseJapan yeZen ngenxa yenkosi uBashöAbabhali abaningi baqhubekile nokuguqula imitha yokuqala ngenkathi abanye beyishintshe kancane, bezala i-haikus enezikhombo kwezinye izingqikithi futhi enamavesi anamaqoqo amaningi.
Iqala kanjani i-haikus
Umsuka we-haikus uhlobene nenkolo e-China Yasendulo. Ngaleso sikhathi sobuBuddha, ubuConfucian, nobuTao, ​​zaduma kakhulu njengendlela yokufinyelela kwabanye nokuveza imicabango. Kodwa-ke, kwakusekuqaleni kwekhulu leshumi nesithupha lapho beqala ukwaziwa kangcono ngenxa kaMatsuo Bashoo, omunye wabantu ababamele kakhulu lezi zinkondlo.
Ngokusobala, i-haiku iyinhlobonhlobo yamaHaikai, okuyizinkondlo zamavesi angama-36, 50, noma ama-100 aqanjwa eqenjini, okungukuthi, phakathi kwabantu abaningana, imbongi eyinhloko kanye nabafundi ayenabo. Owokuqala kwakudingeka abhale amavesi ama-3, ezinhlamvu ezingama-5-7-5. Laba babizwa ngokuthi uHokku. Ngemuva kwesibili, bekufanele enze amavesi amabili ka-7-7 njalonjalo wonke amanye, anikeze ifomu eliphelele iHaikai ebibukeka sengathi ibhalwe ngesandla esisodwa kuphela.
1 Ungayibhala kanjani i-haiku: izakhi
1.4 Dala umuzwa
2 Bhala i-haikus: ungayenza kanjani
2.1 Funda i-haikus
2.3 Utshela okuthile
3 Ukukhethwa kwama-haikus adumile
Ungayibhala kanjani i-haiku: izakhi
Uma unentshisekelo yokufunda ukwenza i-haikus, okokuqala kufanele wazi ukuthi yiziphi izinto ezibalulekile (nokuthi yiziphi izici) ze-haikus. Lezi izi:
I-haiku yakhiwe ngamavesi amathathu. Owokuqala wamaqoqo ama-5, owesibili ka-7 nowesithathu ka-5. Sekukonke, kufanele kube namaqoqo angama-17. Le yi-haiku yakudala, yize kulezi zinsuku kuvunyelwe ukwehluka kancane phakathi kwamavesi. Manje, inani selisesikhathini se-17.
I-kigo empeleni ukufakwa, ngaphakathi kwe-haiku, kwenkathi yonyaka. Akusho ukuthi kufanele uyiqambe inyanga ekuyo, noma uma kuyintwasahlobo, ihlobo, ukuwa noma ubusika. Kepha into emele lokhu: iqhwa, umlilo, amaqabunga, izimbali ...
Kunezinhlobo eziningi ze-haikus, futhi zonke ziyizindikimba ezahlukahlukene, kepha ama-Classics asebenzisa imvelo njengento eyisisekelo ekudalweni kwawo. Ngakho-ke uma ufuna ukubhala eduze ne- "original" ngangokunokwenzeka, cabanga ngemvelo.
I-haiku akuyona inhlanganisela yamagama ahambelana kahle futhi yilokho kuphela. Kufanele bahlanganyele nomfundi futhi babenze bazizwe okuthile lapho befunda. Kungakho kunzima ukubhala ama-haikus amahle impela, ngoba kufanele ukhethe amagama athile futhi ubanikeze umuzwa ukuze abantu bezwe ukuzwa ngabo.
Bhala i-haikus: ungayenza kanjani
Manje njengoba wazi izakhi, sekuyisikhathi sokuzisebenzisa. Okokuqala, ungadikibali uma ezokuqala zingaphumi, noma zimbi, ngoba kufanele uqhubekele phambili ukuze uthuthuke. Noma kunjalo, kunezinto ezithile ongazenza.
Lapho umbhali efuna ukubhala, kufanele aqale abe nesisekelo, futhi lokhu kutholakala ngokufunda amanoveli nemisebenzi ehlobene nothando lwakhe. Okufanayo kuya kuma-haikus. Uma ufuna ukuwabhala, okokuqala kufanele ufunde okuningi ukubona ingqikithi yawo.
Ungesabi ukuthonywa ngumbhali. Kweyokuqala ezokwenzeka, kepha kancane kancane uzobuchaza ubuntu bakho futhi wenze okudaliwe okungokoqobo ngokuphelele.
Uzizwa kanjani lapho ubona amanzi emvula ehla? Futhi ubona nini ukuphuma nokushona kwelanga? Kwesinye isikhathi, Izinto zansuku zonke azenzi sizizwe lutho, kepha nokho siyazibona. Ngakho-ke, ukucabanga ngokufuna leyo mizwa esisizayo kusisiza ukwenza i-haikus.
Isibonelo, usuku olunamafu lungasho ukudabuka kwabanye, kepha kwabanye luyinjabulo; ukubanda kungasho ubukhali, kepha futhi ukusondelana nabanye.
Ungazami ukuthola amavesi alinganayo uma engabalwa. Kuyinto embi kunazo zonke ongayenza. Kufanele wakhe indaba encane kakhulu kulawo mavesi amathathu ajabulisayo nokuthi, ngaphezu kwalokho, kuphelele endabeni.
Ukukhethwa kwama-haikus adumile
Ekugcineni, lapha sikushiya izibonelo eziningi ze-haikus ezidumile ukuze uzazijwayele nazo.
Kungani kuzoba njalo
Yini engigugayo lokhu kuwa?
Izinyoni zidlula emafwini.
Njalo isigqoko esifanayo
nezimbadada zotshani ezifanayo!
futhi yasula kangcono
ukungabaza kuphela okuzongena
Kuphephezelisa umculo odabukisayo
Izingane ziyeza -
Ngivakashele ithuna lakhe eKiso.
Ukuvula umnyango kuzokhombisa uBuddha
wesabe ukucabanga kwakhe
kunendlela enqamulelayo eya enyangeni.
Alikho nelilodwa iqabunga
Ngisho nenyanga ayilali
Banuka amaphasika abo
Intambo yenduku yokudoba
ukucabanga kwami ​​okuphaphathekile
olwandle emanzini amancane-
Ayikho ingane yokusondela
Konke kubonakala kunganyakazi
Lokhu ekuseni okukhithika
Uma bevala ekuseni
Igatsha eliqhakazayo lomuthi weplamu
Kusuka ku-violet yamafu
Umcabango wami uqondisiwe.
Njengoba ngibuke inyanga
Ngishiya le mpilo
Amafu esiqongweni sentaba
Futhi intethe iyagxuma esigodini.
Ngaphansi kwezinkanyezi ezibunile
Isikela lami lishaya ithuna
Izinkulungwane ezincane zezinhlanzi ezimhlophe
Uyanqikaza, ukuqhuma kwezimbali.
khumbula lolo thando namhlanje
Izolo ebusuku ngimbozile
izingane zami ezilele
Okubi kakhulu kwe-echo
ukuthi kusho okufanayo
phakathi kwamaphayini namatshe
Ehamba ngendwangu yakhe
lenyanga ecace bha
lags phezu izimbali
iso alikwazi ukuthola
Ukuze iphunga iplamu
Imvula izolo ebusuku
imbozwe namhlanje ekuseni
Ngabe unesibindi sokuhlanganyela i-haikus yakho oyithandayo noma oyithandayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Yini ama-haikus?
URoberto Soto kusho
UBorges wabhala "ubuqaba"? Bheka uyisilima.
Izinkondlo ubuciko bokusho nje ukuthi umuntu uzizwa kanjani, achaze, abale, abala, kungenye kuphela yalabo abangayiqondi le nkondlo.Umbhedo sonke esiwubhalayo, ikakhulukazi labo abenza sengathi bakala esikubhalayo.
umgwaqo mude kodwa uyaba mfushane lena yihaiku
I-haiku kaBenedetti iyona engcono kunazo zonke
UGrande Benedetti. Ngizokhuthazeka ukubhala eyodwa bese ngiyithumela
UJuan Haiku kusho
Indlela inde? Yini uCarlos? Kwenzenjani?
Uthando thanda uthando kusho
zonke izithunzi zimboziwe
UMarco Ortega kusho